Buy Mi Mix2(465,000Ks) in ရန်ကုန် on ipivi.com
ရောင်းချသူ: Alex Romeo
Mi Mix 2. Ram664gb .Ceramic Black. 18K Gold ပါတယ်နော။ အလုံးအသန့် 99% New . ဘူးပစည်းအစုံအသစ်တိုင်းကိုင်ရမယ်။ အရမ်းလှတဲ့ဖုန်းလေး။ Battery ပိုးဆိုးပက်ဆက်ခံတယ်။ Camera လန်းချက်ကသေလို့ရတယ်လုံးဝရှယ်။ Finger Print ထိပွင့်။ လာကြည့်လို့စိတ်တိုင်းမကျရင်ရိုက်သာခွဲလိုက်။ ဘာ Error မှမရှိဘူးတာဝန်ယူတယ်။
Ph No. 09448286430
အမည်: Mi Mix 2